Kazakhstan: Ny zavakanto maoderina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 8:15 GMT
(Marihina fa tamin'ny 9 Janoary 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Heveriko fa te hahita ny zava-nitranga tao amin'ny fanokafana zavakanto tao Almaty avokoa ny olona rehetra. Noho izany, nandefa sary vitsivitsy tamin'ny fampisehoana farany natrehako aho tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra. Heveriko fa ho gaga ianareo ry zalahy raha hahita fa tsy miendrika na miakanjo hafa noho ny karazana mpanara-damaody any amin'ny fanokafana zavakanto any San Francisco na New York izany.
Ho amin'ny fanokafana ny fampirantiana Seismograms tao amin'ny Foibe ho an'ny Zavakanto Maoderina Soros ny alin'ity fampisehoana ity. Miresaka momba ny fomba tokony hitsikeran'ny mpanakanto ny governemanta sy ny kolontsaina ao Kazakhstan ny fampisehoana. Tokony ho penina sy taratasy mamolavola ao amin'ny Seismograms ireo mpanakanto, manaparitaka ary manatsikafona manerana ny toerana ary mampiseho ny kolikoly ataon'ny governemanta sy ny mpanankarena vaovao.
Nanoratra i Daniel fa “miezaka ny hampivoatra ny zavakanto Kazakh avy ao an-toerana ireo ivontoerana lehibe ho an'ny zavakanto any Kazakhstan mba hanampiana amin'ny fananganana ny mari-panondroam-pirenena. Nanampy ireo mpanakanto vahiny hiara-hiasa amin'ny ao an-toerana ny Foibe Soros, izay nanaovan'i Daniel ny fampiratiana ihany koa. Mpanakanto maoderina maro, araka ny filazan'i Daniel, no nahomby tamin'ny fividianan'ny vahiny ny sanganasan'izy ireo, ka nahatonga azy ireo hamokatra zavakanto “izay toa mifototra amin'ny kolontsaina nentim-paharazana Kazakh sy ny sary hosodokon'izy ireo [ary] nampiasa ny teknikan'ny tany amin'ny tapaky ny taonjato faha-20 izay matetika mampahatsiahy ny hetsika ara-javakanto maoderina tamin'ny taonjato faha 20 tany Alemaina, ny zavakanto izay nampiasa ny loko marevaka Frantsay, ary ny Surrealisma. “
Mora ny mahita ireo trano fampirantiana zavakanto izay karazana mpivarotra antsinjarany/fampirantiana Kazakh mivarotra sehon-tsehatra yourte sy soavaly ary banja midadasika nentim-paharazana. Tsy gaga aho raha maro be ny asa vita efa vonona ao an-toerana. Tsy mahagaga ahy raha mivarotra ny ankamaroan'ny sanganasany ireo mpanakanto ireo. Mirotsaka amin'izany izy ireo mba hanomezana fahafaham-po ny tsena vahiny. Kanefa, tsy izany (ho ahy) no zavakanto matotra, saingy mety ho tsara izany raha toa ka faritan'ny olona ho haingon-javakanto ho an'ny olona izay mila zavakanto azo antoka sy mahafinaritra ao amin'ny trano fiandrasana ao amin'ny toeram-piasan'izy ireo.
Fanadihadiana tsara mikasika ny fomba mety hampisy fiantraikany amin'ny tsenan'ny toekarena eo amin'ny zavakanto izany.